ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ဘုရားသခင် ဘာကြောင့် ဖြစ်ခွင့်ပြုထားတာလဲ — ကင်းမျှော်စင် အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်
bh အခန်း ၁၁ စာ. ၁၀၆-၁၁၄
ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ဘုရားသခင် ဘာကြောင့် ဖြစ်ခွင့်ပြုထားတာလဲ
ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ဘာကြောင့် ဒီလောက်အထိ များနေရတာလဲ
ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးကို သင် ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
ဆင်းရဲဒုက္ခ ဘာကြောင့် ဒီလောက်များရတာလဲသမ္မာကျမ်းစာ သွန်သင်ရာများ
သမ္မာကျမ်းစာ သွန်သင်ရာကင်းမျှော်စင် ယေဟောဝါ၏နိုင်ငံတော်ကိုကြေညာခြင်း (လူထုအတွက်စာစောင်)—၂၀၁၇
ဒုက္ခဆင်းရဲကို ဘုရားသခင်အဘယ်ကြောင့် ခွင့်ပြုတော်မူသနည်းထာဝရအသက်ရစေသော အသိပညာအသိပညာ
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ဘုရားသခင်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာလား။
ဧဒင်ဥယျာဉ်မှာ ဘယ်အရေးကိစ္စ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သလဲ။
လူသားတွေခံစားနေရတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ဘုရားသခင် ဘယ်လိုဖယ်ရှားပေးမလဲ။
၁၊ ၂။ ယနေ့အချိန်မှာ ဘယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို လူတွေခံစားနေရသလဲ၊ အဲဒါကြောင့် လူများစွာက ဘယ်မေးခွန်းတွေကို မေးကြသလဲ။
စစ်ဒဏ်ခံနေရတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ တိုက်ပွဲ အပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် သေဆုံးသွားတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ အရပ်သားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့အလောင်းတွေကို ကျင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာ စုပေါင်းမြှုပ်နှံခဲ့တယ်၊ ကျင်းရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာ အမှတ်အသားတိုင်တွေ စိုက်ထားတယ်။ တိုင်တစ်ခုစီမှာ “ဘာကြောင့်လဲ” ဆိုပြီး ရေးထားတယ်။ လူတွေက အရမ်းဝမ်းနည်းကြေကွဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာ အဲဒီမေးခွန်းကို မေးလေ့ရှိတယ်။ စစ်ပွဲ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ရောဂါ၊ ရာဇဝတ်မှုတွေကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့ချစ်မြတ်နိုးရသူတွေ သေဆုံးသွားတဲ့အခါ၊ သူတို့ရဲ့အိုးအိမ်တွေ ပျက်စီးသွားတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားအရာတွေကြောင့် ဖော်မပြနိုင်တဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ လူတွေက အဲဒီမေးခွန်းကို ဝမ်းနည်းပက်လက်နဲ့ မေးတတ်ကြတယ်။ အဲဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေ ဘာကြောင့် ကြုံရသလဲဆိုတာကို သိချင်ကြတယ်။
၂ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ဘုရားသခင် ဘာကြောင့် ဖြစ်ခွင့်ပြုထားတာလဲ။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်က တန်ခိုးအကြီးမားဆုံးအရှင်၊ မေတ္တာပြည့်ဝပြီး ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့၊ တရားမျှတတဲ့အရှင် ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာကြောင့် မုန်းတီးမှု၊ မတရားမှုတွေ ဒီလောက်များရတာလဲ။ အဲဒီအကြောင်းတွေကို သင် စဉ်းစားဖူးပါသလား။
၃၊ ၄။ (က) ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ဘုရားသခင် ဘာကြောင့် ဖြစ်ခွင့်ပြုထားသလဲလို့ မေးတာက မမှားဘူးဆိုတာ ဘယ်အချက်ကဖော်ပြသလဲ။ (ခ) ဆိုးသွမ်းမှု၊ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယေဟောဝါ ဘယ်လိုခံစားရသလဲ။
၃ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ဘုရားသခင် ဘာကြောင့် ဖြစ်ခွင့်ပြုထားသလဲလို့ မေးတာက မှားပါသလား။ အဲဒီလိုမေးလို့ ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သလို ဒါမှမဟုတ် မလေးစားသလို ဖြစ်သွားမှာကို တချို့ကစိုးရိမ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သမ္မာကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါ သစ္စာရှိပြီး ဘုရားသခင်ကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းတဲ့သူတွေလည်း အဲဒီလိုမေးခွန်းတွေ မေးတာကို သင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ၊ ပရောဖက်ဟဗက္ကုတ် ယေဟောဝါကို ဒီလိုမေးခဲ့တယ်– “မတရားသောအမှုကို အကျွန်ုပ်အား အဘယ်ကြောင့် ပြတော်မူသနည်း။ အဓမ္မအမှုကို အဘယ်ကြောင့် မြင်စေတော်မူသနည်း။ လုယူခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုခြင်းအမှုသည် အကျွန်ုပ်ရှေ့မှာ အဘယ်ကြောင့်ရှိရပါသနည်း။ ငြင်းခုံခြင်း၊ ရန်တွေ့ခြင်းကိုလည်း အဘယ်ကြောင့် လူချင်းပြုရပါသနည်း။”—ဟဗက္ကုတ် ၁:၃။
ယေဟောဝါက ဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်မှာဖြစ်တယ်
၄ အဲဒီလိုမေးခွန်းတွေကို သစ္စာရှိတဲ့ပရောဖက်ဟဗက္ကုတ် မေးတဲ့အတွက် သူ့ကို ယေဟောဝါ အပြစ်တင်ခဲ့ပါသလား။ အပြစ်မတင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစား ဘုရားသခင်က စိတ်ရင်းနဲ့ပြောတဲ့ ဟဗက္ကုတ်ရဲ့စကားတွေကို စွမ်းအားတော်တိုက်တွန်းမှုနဲ့ရေးတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဟဗက္ကုတ် ပိုသိရှိလာဖို့နဲ့ ယုံကြည်ခြင်းတိုးများလာဖို့ ဘုရားသခင် သူ့ကို ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ယေဟောဝါက သင့်ကိုလည်း အဲဒီလို ကူညီပေးချင်တယ်။ ကိုယ်တော်က “သင်တို့ကို ဂရုစိုက်တော်မူ” တယ်ဆိုတဲ့ ကျမ်းစာသွန်သင်ချက်ကို သတိရပါ။ (၁ ပေတရု ၅:၇) ဆိုးသွမ်းမှုတွေနဲ့ ဆိုးသွမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို လူတွေမုန်းတာထက် ဘုရားသခင်က ပိုမုန်းတယ်။ (ဟေရှာယ ၅၅:၈၊ ၉) ဒါဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ဘာကြောင့် ဒီလောက်အထိ များနေရတာလဲ။
၅။ လူ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သာသာရေးဆရာတွေက ဘယ်လိုရှင်းပြကြသလဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျမ်းစာသွန်သင်ချက်က ဘာလဲ။
၅ လူတွေဟာ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ဘာကြောင့် ဒီလောက်အထိ များနေရသလဲဆိုပြီး ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဆရာတွေကို သွားမေးကြတယ်။ လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခခံရတာဟာ ဘုရားသခင့်အလိုတော်ပဲ၊ အဖြစ်ဆိုးတွေအပါအဝင် ဖြစ်ပျက်ရမယ့်အရာအားလုံးကို ဘုရားသခင်က ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးသားလို့ သူတို့ ပြန်ဖြေတတ်ကြတယ်။ ဘုရားသခင့်နည်းလမ်းတော်တွေက ရှုပ်ထွေးဆန်းကြယ်တယ်၊ ဘုရားသခင်က သူနဲ့အတူ ကောင်းကင်မှာနေဖို့ လူတွေနဲ့ ကလေးတွေကိုတောင် သေစေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကို လူများစွာ ရရှိခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်လေ့လာသိရှိခဲ့တဲ့အတိုင်း ယေဟောဝါဘုရားသခင်က မကောင်းတဲ့အရာကို ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ ကျမ်းစာမှာ “ဒုစရိုက်သည် ဘုရားသခင်နှင့်လည်းကောင်း၊ အပြစ်သည် အနန္တတန်ခိုးရှင်နှင့်လည်းကောင်း ဝေးပါစေ” လို့ပြောထားတယ်။—ယောဘ ၃၄:၁၀။
၆။ ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအတွက် လူတွေက ဘုရားသခင်ကို ဘာကြောင့် မှားယွင်းစွာ အပြစ်တင်ကြတာလဲ။
၆ ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေက ဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ လူတွေ ဘာကြောင့် တလွဲအပြစ်တင်သလဲဆိုတာ သင်သိပါသလား။ အများအားဖြင့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်က ဒီလောကကို အမှန်တကယ် အုပ်ချုပ်နေတယ်လို့ သူတို့ယူဆတဲ့အတွက် ကိုယ်တော့်ကို အပြစ်တင်ကြတာဖြစ်တယ်။ ကျမ်းစာမှာပါတဲ့ ရိုးရှင်းပြီး အရေးကြီးတဲ့အမှန်တရားကို သူတို့မသိကြဘူး။ အဲဒီအမှန်တရားကို ဒီစာအုပ်ရဲ့အခန်း ၃ မှာ သင်သိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ ဒီလောကကို အမှန်တကယ် အုပ်ချုပ်နေသူက စာတန်မာရ်နတ်ပဲ။
၇၊ ၈။ (က) ဒီလောက,က ယင်းကိုအုပ်စိုးသူရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို ဘယ်လို ထင်ရှားဖော်ပြသလဲ။ (ခ) လူ့မစုံလင်မှု၊ “မမျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ” က ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ဘယ်လိုဖြစ်စေသလဲ။
၇ ‘တစ်လောကလုံးသည် ဆိုးညစ်သူ၏ဩဇာအောက်တွင် ရှိနေကြ၏’ ဆိုပြီး ကျမ်းစာမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားတယ်။ (၁ ယောဟန် ၅:၁၉) ဒီအချက်ကို စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ သင် သဘောပေါက်လာတယ် မဟုတ်လား။ “လူနေထိုင်ရာ မြေတစ်ပြင်လုံးကို လှည့်စား” နေတဲ့ မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ ဝိညာဉ်သတ္တဝါရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကို ဒီလောက,က ထင်ရှားဖော်ပြနေတယ်။ (ဗျာဒိတ် ၁၂:၉) စာတန်ဟာ မုန်းတီးတဲ့သဘောနဲ့ပြည့်နေပြီး လှည့်စားတတ်တဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ဩဇာအောက်မှာရှိတဲ့ ဒီလောက,က မုန်းတီးမှု၊ လှည့်စားမှု၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ ဒါက ဆင်းရဲဒုက္ခများရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲ။
၈ ဆင်းရဲဒုက္ခများရတဲ့ ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့ အခန်း ၃ မှာလေ့လာခဲ့တဲ့အတိုင်း ဧဒင်ဥယျာဉ်မှာ ပုန်ကန်မှုဖြစ်ပြီးကတည်းက လူသားတွေဟာ မစုံလင်သူ၊ အပြစ်ရှိသူတွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြလို့ပဲ။ အပြစ်ရှိသူတွေဖြစ်တဲ့ လူသားတွေဟာ အာဏာရဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြလို့ စစ်ပွဲတွေ၊ ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ (ဒေသနာ ၄:၁; ၈:၉) ဆင်းရဲခက်ခဲရတဲ့ တတိယအကြောင်းရင်းက “မမျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ” ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ (ဒေ. ၉:၁၁၊ ကဘ ကိုဖတ်ပါ။) ဥပမာ၊ လူတစ်ယောက်က အုန်းပင်အောက်မှာ လမ်းလျှောက်နေတုန်း အုန်းသီးက သူ့ခေါင်းပေါ်ကြွေကျလို့ ဒဏ်ရာရနိုင် ဒါမှမဟုတ် သေဆုံးသွားနိုင်တယ်။ ယေဟောဝါရဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမရှိတဲ့လောကမှာ လူတွေဟာ မရှိသင့်တဲ့အချိန်မှာ မရှိသင့်တဲ့နေရာကို ရောက်နေတဲ့အတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။
၉။ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ဆက်ခွင့်ပြုထားရတဲ့ အကြောင်းကောင်းတစ်ခု ယေဟောဝါမှာရှိရမယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သလဲ။
၉ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ဘုရားသခင်ဖြစ်ပေါ်စေတာမဟုတ်ဘူးလို့ သိရတာက နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ လူတွေကို ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေတဲ့ စစ်ပွဲတွေ၊ ရာဇဝတ်မှုတွေ၊ ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေက ကိုယ်တော်ကြောင့် ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးကို ယေဟောဝါ ဘာကြောင့် ဖြစ်ခွင့်ပြုရတယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်တော်က အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒါတွေကို ရပ်တန့်ပစ်နိုင်တဲ့တန်ခိုး ကိုယ်တော့်မှာရှိရမယ်။ ဒါဆိုရင် အဲဒီတန်ခိုးကို ကိုယ်တော် ဘာကြောင့်အသုံးမပြုတာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သိကျွမ်းလာတဲ့ မေတ္တာရှင်ဘုရားသခင်မှာ အကြောင်းကောင်းရှိလို့ဖြစ်ရမယ်။—၁ ယောဟန် ၄:၈။
၁၀။ စာတန်က ဘာကို ပြဿနာရှာခဲ့သလဲ၊ ဘယ်လိုနည်းအားဖြင့်လဲ။
၁၀ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ဘုရားသခင် ဖြစ်ခွင့်ပြုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိရှိဖို့ ဆင်းရဲဒုက္ခစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကို နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ ယေဟောဝါကိုမနာခံဖို့ အာဒံနဲ့ဧဝကို စာတန်သွေးဆောင်ချိန်မှာ အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ စာတန်က ယေဟောဝါမှာ တန်ခိုးရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သံသယဝင်တာမဟုတ်ဘူး။ ယေဟောဝါမှာ အကန့်အသတ်မဲ့တန်ခိုး ရှိတယ်ဆိုတာ စာတန်သိတယ်။ အဲဒီအစား စာတန်က ယေဟောဝါရဲ့ အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပြဿနာလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံတွေအတွက် အကျိုးရှိမယ့်အရာကို မပေးဘဲထိမ်ချန်ထားတဲ့ လိမ်လည်သူဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းအားဖြင့် စာတန်က ယေဟောဝါကို ဆိုးသွမ်းတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်တယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့တယ်။ (ကမ္ဘာဦး ၃:၂-၅ ကိုဖတ်ပါ။) ဘုရားသခင် မအုပ်ချုပ်တာက လူသားတွေအတွက် ပိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုး စာတန်ပြောခဲ့တယ်။ ဒါက ယေဟောဝါရဲ့ အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ဝေဖန်ထိုးနှက်လိုက်တာပဲ။
၁၁။ ယေဟောဝါက ဧဒင်ဥယျာဉ်မှာ ပုန်ကန်သူတွေကို ဘာကြောင့် ချက်ချင်းမဖျက်ဆီးခဲ့တာလဲ။
၁၁ ယေဟောဝါကို အာဒံနဲ့ဧဝ ပုန်ကန်ခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်က ဒီလိုပြောတဲ့သဘောသက်ရောက်တယ်– ‘ငါတို့ကို ယေဟောဝါ အုပ်ချုပ်ဖို့မလိုဘူး။ ဘယ်ဟာမှန်တယ်၊ ဘယ်ဟာမှားတယ်ဆိုတာ ငါတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။’ ဒီပြဿနာကို ယေဟောဝါ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ အဲဒီပုန်ကန်သူတွေ မှားနေတယ်၊ ကိုယ်တော့်နည်းလမ်းကသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာ အသိဉာဏ်ရှိသတ္တဝါအားလုံးကို ကိုယ်တော် ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲ။ တချို့က အဲဒီသူပုန်တွေကို ဘုရားသခင် ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပစ်ပြီး လူကို အစကနေ ပြန်ဖန်ဆင်းသင့်တယ်လို့ ပြောကြမယ်။ ဒါပေမဲ့ ယေဟောဝါက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အာဒံနဲ့ဧဝရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ ပြည့်နေစေဖို့ဆိုတဲ့ ကိုယ်တော့်ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ သူတို့ကို ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးမှာ ဆက်အသက်ရှင်စေချင်တယ်။ (ကမ္ဘာဦး ၁:၂၈) ယေဟောဝါက သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကို အမြဲပြည့်စုံစေတယ်။ (ဟေရှာယ ၅၅:၁၀၊ ၁၁) ဒါ့အပြင် ပုန်ကန်သူတွေကို ဧဒင်ဥယျာဉ်ကနေ ရှင်းထုတ်ပစ်လိုက်တာက ယေဟောဝါရဲ့ အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
၁၂၊ ၁၃။ ဒီလောကကို စာတန်အုပ်ချုပ်ဖို့နဲ့ လူလူချင်းအုပ်ချုပ်ဖို့ ယေဟောဝါဘုရားသခင် ခွင့်ပြုခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို ဥပမာပေးဖော်ပြပါ။
၁၂ ဥပမာတစ်ခုကို သုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။ ဆရာတစ်ယောက်က ကျောင်းသားတွေကို ခက်တဲ့သင်္ချာတစ်ပုဒ်ရဲ့ တွက်နည်းကို သင်ပေးနေတယ်ဆိုပါစို့။ ဉာဏ်ကောင်းပေမဲ့ စကားနားမထောင်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ဆရာရဲ့တွက်နည်း မှားနေတယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒီကျောင်းသားက ဒီပုစ္ဆာကို ဆရာမတွက်နိုင်ဘူးဆိုတာ သက်သေပြဖို့အတွက် သူ့မှာ ပိုကောင်းတဲ့တွက်နည်းရှိတယ်လို့ အခိုင်အမာပြောတယ်။ ကျောင်းသားတချို့က သူပြောတာမှန်တယ်လို့ ထင်ပြီး သူ့ဘက်ပါသွားကြတယ်။ ဆရာ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ စကားနားမထောင်တဲ့ အဲဒီကျောင်းသားတွေကို စာသင်ခန်းထဲကနေ မောင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေ ဘယ်လိုထင်သွားမလဲ။ စကားနားမထောင်တဲ့ သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့ သူနဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေ မှန်တယ်လို့ ထင်သွားနိုင်တယ်။ အတန်းထဲမှာရှိတဲ့ တခြားကျောင်းသားအားလုံးက ဆရာဟာ သူမှားနေတယ်ဆိုတာ ပေါ်သွားမှာစိုးလို့ အဲဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုပြီး ဆရာ့အပေါ်ရိုသေလေးစားမှု လျော့သွားနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာက အဲဒီပုစ္ဆာကို စကားနားမထောင်တဲ့ကျောင်းသား ဘယ်လိုတွက်တယ်ဆိုတာ အတန်းသားတွေရှေ့မှာပြဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်မှာဖြစ်တယ်။
၁၃ ယေဟောဝါက အဲဒီဆရာလုပ်တဲ့နည်းနဲ့ ဆင်တူတဲ့နည်းကို သုံးခဲ့တယ်။ ယေဟောဝါ ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ သူပုန်တွေကို ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သလား။ မဖျက်ဆီးခဲ့ဘူး။ သန်းနဲ့ချီတဲ့ တခြားကောင်းကင်တမန်တွေက ဒီအဖြစ်အပျက်ကို စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ (ယောဘ ၃၈:၇; ဒံယေလ ၇:၁၀) ယေဟောဝါ မှန်သလား ဒါမှမဟုတ် စာတန်ပဲမှန်သလားဆိုတာ သူတို့သိဖို့လိုတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားလာမယ့် လူသားတွေလည်း အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူက ယေဟောဝါလား၊ စာတန်လားဆိုတာ သိဖို့လိုတယ်။ ဒါဆိုရင် ယေဟောဝါ ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ လူသားတွေကို စာတန် ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာကို သိစေဖို့ ကိုယ်တော်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ စာတန့်လက်အောက်မှာ လူလူချင်းအုပ်ချုပ်ဖို့လည်း ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။
၁၄။ လူသားတွေကို အချင်းချင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးဖို့ ယေဟောဝါဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက် ဘာအကျိုးရရှိမလဲ။
၁၄ ပုံဥပမာမှာ စကားနားမထောင်တဲ့ကျောင်းသားနဲ့ သူ့ဘက်ပါသွားတဲ့သူတွေ မှားတယ်ဆိုတာ ဆရာသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မှန်တယ်လို့ထင်တဲ့အတိုင်း သူတို့ကိုပုစ္ဆာတွက်ဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်တာက တစ်တန်းလုံးအတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုလည်း ဆရာသိတယ်။ စကားနားမထောင်တဲ့သူတွေ မတွက်နိုင်တဲ့အခါ အမှန်ကိုသိချင်တဲ့ကျောင်းသားအားလုံးက ဆရာကသာ စာသင်ဖို့ အရည်အချင်းရှိသူဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိလာကြမယ်။ စကားနားမထောင်တဲ့သူတွေကို နောက်ပိုင်းမှာ ဘာကြောင့် ကျောင်းကနေထုတ်ပစ်တယ်ဆိုတာ သူတို့နားလည်ကြမှာဖြစ်တယ်။ အလားတူပဲ စာတန်နဲ့ သူ့ရဲ့နောက်လိုက်ပုန်ကန်သူတွေ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ လူသားတွေက အချင်းချင်းမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ စိတ်နှလုံးရိုးဖြောင့်သူတွေနဲ့ ကောင်းကင်တမန်တွေ သိမြင်လာမယ်၊ အဲဒီကနေ သူတို့တွေ အကျိုးခံစားရမယ်ဆိုတာ ယေဟောဝါသိတယ်။ ရှေးခေတ်က ယေရမိလိုပဲ ဒီအမှန်တရားကို သူတို့ နားလည်လာကြမှာဖြစ်တယ်– ‘အို၊ ယေဟောဝါ လူသည် မိမိသွားရာလမ်းကိုအစိုးမရ။ သွားစဉ်အခါ မိမိခြေရာတို့ကို မစီရင်တတ်သည်ကို အကျွန်ုပ်သိပါ၏။’—ယေရမိ ၁၀:၂၃။
၁၅၊ ၁၆။ (က) ယေဟောဝါက ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ဘာကြောင့် ဒီလောက်ကြာအောင် ဖြစ်ခွင့်ပြုထားရတာလဲ။ (ခ) ယေဟောဝါက ရာဇဝတ်မှုလို ကြောက်မက်ဖွယ်ရာတွေကို ဘာကြောင့် မတားဆီးပေးတာလဲ။
၁၅ ဒါဆိုရင် ဘုရားသခင်က ဘာကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ဒီလောက်ကြာကြာ ဖြစ်ခွင့်ပြုထားရတာလဲ။ မကောင်းမှုတွေမဖြစ်အောင် ကိုယ်တော် ဘာကြောင့်မတားဆီးသလဲ။ ဥပမာမှာပါတဲ့ဆရာ လုပ်မှာမဟုတ်တဲ့ အရာနှစ်ခုကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ပထမတစ်ခုက ဆရာဟာ စကားနားမထောင်တဲ့ကျောင်းသား ပုစ္ဆာတွက်နေတာကို ရပ်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒုတိယ၊ ဆရာဟာ ဒီကျောင်းသား တွက်နေတဲ့ပုစ္ဆာကို ဝိုင်းကူတွက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ အလားတူပဲ ယေဟောဝါ လုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တဲ့ အရာနှစ်ခုကို သုံးသပ်ပါ။ ဦးဆုံး၊ စာတန်နဲ့ သူ့ဘက်တော်သားတွေ သူတို့ပြောတာမှန်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြဖို့ ကြိုးစားနေတာကို ဘုရားသခင်က ဝင်တားမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် လိုအပ်တဲ့အချိန် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကိုယ်တော် ခွင့်ပြုတယ်။ နှစ်ထောင်ချီကြာတဲ့လူ့သမိုင်းမှာ လူသားတွေက အချင်းချင်းအုပ်ချုပ် ဒါမှမဟုတ် အစိုးရပုံစံအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲအုပ်ချုပ်ခွင့် ရခဲ့ကြတယ်။ လူသားတွေက သိပ္ပံပညာနဲ့ တခြားနယ်ပယ်တွေမှာ တိုးတက်ခဲ့ပေမဲ့ မတရားမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ ရာဇဝတ်မှု၊ စစ်မှုတွေဘက်မှာတော့ ဆိုးသည်ထက်ဆိုးလာတယ်။ ဒါတွေက လူ့အုပ်ချုပ်ရေး မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာ ဖော်ပြတယ်။
၁၆ ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ ဒီလောကအပေါ် စာတန်အုပ်ချုပ်နေတာကို ယေဟောဝါ မကူညီပေးခဲ့ဘူး။ အကယ်၍ ဘုရားသခင်က ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို တားဆီးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ပုန်ကန်သူတွေကို ကူညီပေးသလို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ လူတွေက ဆိုးကျိုးမခံစားရဘဲ လူလူချင်းကို ကောင်းကောင်း အုပ်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ ယူမှတ်သွားအောင် လုပ်ပေးသလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ယေဟောဝါသာ အဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် လိမ်ညာသူတွေနဲ့ တစ်ကျိတ်တည်းတစ်ဉာဏ်တည်း ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ “ဘုရားသခင် မုသာမသုံးနိုင်” ဘူး။—ဟေဗြဲ ၆:၁၈။
၁၇၊ ၁၈။ လူ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ စာတန့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ထိခိုက်မှုအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယေဟောဝါ ဘာလုပ်ဆောင်ပေးမလဲ။
၁၇ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်ကိုပုန်ကန်တဲ့ ဒီကာလရှည်အတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုပြောမလဲ။ ယေဟောဝါက အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိရသင့်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တော်က လူသားတွေခံစားနေရတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး ဖယ်လည်း ဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်း ပျက်စီးနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကို ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ နေရာဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ ယေရှုရဲ့ရွေးနုတ်ဖိုး ပူဇော်ရာယဇ်ကို ယုံကြည်ခြင်းက အပြစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို ဖယ်ရှားပေးမယ်၊ သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေ ပြန်အသက်ရှင်လာမယ်။ ဘုရားသခင်က ယေရှုကိုသုံးပြီး “မာရ်နတ်၏အမှုအရာများကို ချိုးဖျက်” မှာဖြစ်တယ်။ (၁ ယောဟန် ၃:၈) ယေဟောဝါက အသင့်တော်ဆုံးအချိန်မှာ ဒီအရာတွေအားလုံး ဖြစ်မြောက်လာအောင် လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ စောစောကတည်းက ကိုယ်တော်အရေးမယူခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းသာနိုင်ပါတယ်၊ အကြောင်းကတော့ ကိုယ်တော့်ရဲ့စိတ်ရှည်မှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တရားအကြောင်း သင်ယူနိုင်ကြပြီး ကိုယ်တော့်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြတယ်။ (၂ ပေတရု ၃:၉၊ ၁၀ ကိုဖတ်ပါ။) ဒီအတောအတွင်းမှာ ဘုရားသခင်ဟာ စိတ်နှလုံးရိုးဖြောင့်တဲ့ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူတွေကို အားတက်သရော ရှာဖွေပြီး ဒီခက်ခဲတဲ့ကာလအတွင်း သူတို့အပေါ်ကျရောက်နိုင်တဲ့ ဘယ်ဆင်းရဲခက်ခဲမှုမျိုးကိုမဆို ခံရပ်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးတယ်။—ယောဟန် ၄:၂၃; ၁ ကောရိန္သု ၁၀:၁၃။
၁၈ ဘုရားသခင်က အာဒံနဲ့ဧဝကို မပုန်ကန်နိုင်အောင် ဖန်ဆင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင် တားဆီးနိုင်ခဲ့မယ်မဟုတ်လားဆိုပြီး တချို့က စဉ်းစားကြမယ်။ အဲဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုရဖို့ သင့်ကို ယေဟောဝါပေးတဲ့ အဖိုးတန်ဆုကျေးဇူးကို သတိရဖို့လိုတယ်။
ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ခံရပ်နိုင်ဖို့ သင့်ကို ဘုရားသခင်ကူညီပေးမယ်
၁၉။ ယေဟောဝါက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘယ်အဖိုးတန်ဆုကျေးဇူး ပေးထားသလဲ၊ ဒါကို ဘာကြောင့် တန်ဖိုးထားသင့်သလဲ။
၁၉ အခန်း ၅ မှာ လေ့လာခဲ့ရတဲ့အတိုင်း လူသားတွေဟာ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒီလက်ဆောင်က အရမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ ဘုရားသခင်က မရေမတွက်နိုင်အောင်များတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို ပင်ကိုသိစိတ်နဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားဖို့ ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေမှာ အမှန်နဲ့အမှားကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ ဉာဏ်စွမ်းမရှိဘူး။ (သုတ္တံ ၃၀:၂၄၊ ကဘ) ဘုရားသခင်က လူတွေကိုလည်း တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့တူအောင် ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုရင် သင်ကြိုက်ပါ့မလား။ ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုလူစားမျိုးဖြစ်ချင်တယ်၊ ဘယ်လမ်းစဉ်ကို လိုက်မယ်၊ ဘယ်လိုလူစားမျိုးနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့မယ် စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက် ဝမ်းသာကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့က လွတ်လပ်မှုအတော်အသင့်ရရှိခြင်းကို နှစ်သက်ကြပြီး ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ကို အဲဒီလို ရရှိခံစားစေချင်တယ်။
၂၀၊ ၂၁။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ဆုကျေးဇူးကို အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်ကြသလဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာကြောင့် အဲဒီလိုပြုလုပ်သင့်သလဲ။
၂၀ အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခံရလို့ လုပ်တာမျိုး ယေဟောဝါမလိုလားဘူး။ (၂ ကောရိန္သု ၉:၇) ဥပမာ၊ ကလေးတစ်ယောက်က တစ်ယောက်ယောက်ကပြောလို့ မိဘကို ရိုသေတာနဲ့ ကလေးကိုယ်တိုင် မိဘကို ရိုသေတာဆိုရင် မိဘတွေက ဘာကိုကြိုက်သလဲ။ ဒါကြောင့် မေးစရာမေးခွန်းက ယေဟောဝါ သင့်ကိုပေးထားတဲ့ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကို သင် ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။ စာတန်၊ အာဒံနဲ့ဧဝဟာ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကို အဆိုးဆုံးနည်းနဲ့ အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ သူတို့က ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်။ သင်ကော။
၂၁ သင့်မှာ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ အံ့ဖွယ်ဆုကျေးဇူးကို အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိတယ်။ သင်က ယေဟောဝါကိုကိုးကွယ်တဲ့ သန်းနဲ့ချီတဲ့သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်ကို ရွှင်လန်းစေကြတယ်၊ အကြောင်းကတော့ စာတန်ဟာ လိမ်လည်သူဖြစ်ကြောင်း၊ အလွန်ညံ့ဖျင်းတဲ့ အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ကြောင်း သက်သေထူရာမှာ သူတို့တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်နေကြလို့ပဲ။ (သုတ္တံ ၂၇:၁၁) မှန်ကန်တဲ့ဘဝလမ်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် သင်လည်း သူတို့လို သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို နောက်အခန်းမှာ ရှင်းပြပါမယ်။
ဒီလောကမှာရှိတဲ့ အခြေအနေဆိုးတွေကို ဘုရားသခင် ဖြစ်ပေါ်စေတာ မဟုတ်ဘူး။—ယောဘ ၃၄:၁၀။
စာတန်က ဘုရားသခင်ဟာ လိမ်လည်သူဖြစ်တယ်၊ ကိုယ်တော့် လက်အောက်ခံတွေအတွက် ကောင်းတဲ့အရာကိုမပေးဘဲ ထိန်ချန်ထားတယ်လို့ ပြောခြင်းအားဖြင့် ယေဟောဝါရဲ့အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ကို သံသယ ဝင်စေခဲ့တယ်။—ကမ္ဘာဦး ၃:၂-၅။
ယေဟောဝါက ကိုယ်တော့်သားတော် ယေရှုခရစ် အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကို အသုံးပြုပြီး ဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးနဲ့ အဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကိုပါ ဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်တယ်။—၁ ယောဟန် ၃:၈။